Somaliland Horta Website cPanel X
Qoraal kasta magaciisa ama cinwaankiisa ayaa tilmaama ku-jireenkiisa (it’s content’s) Website-kan sida magiciisa ka muuqata, waa mid wax kastaba ka hormarinaya danaha guud Ee Somaliland. Maskax furan Oo caafimaad qabta ayuu ku eegayaa, faallaynayaa ama kaga warramayaa kuna falanqaynayaa wixii Somaliland la xidhiidha. Intuu madax-bannaan-karo Website ayuu madax-bannaan yahay. Waxaanu dabooli doonaa (cover) siyaasadda (politics) dhaqaalaha adeegyada bulshadda, suugaanta, taariikhda i.w.m. Waa Website aannu filayno inay ku kulmaan akhriskiisa iyo adeegsigiisaba qaybaha bulshada ee kala duwan. Dhalliil iyo taageeroba wuu gudbin karaa waxaase ka reebban weerar qofaysan (personal attack).
Waxaa xus mudan in uu Website-kani si gaar ah u danayn doono, geed dheer iyo geed gaabanba isugu taagi doono siddii loo hanan lahaa aqoonsiga Somaliland; arrintaas oo ah mid ay reer Somaliland ka mideysanyihiin. U halganka aqoonsiga Somaliland ma aha xil ku gooni ah xukuumadda kolba xilka haysa. Goloyaasha Saddexda ah, Xisbiyada, Ururrada Bulshada, Hay'adaha Madaniga ah, Indheer garatada, Qurba-joogga dhammaan, muwaaddin kasta oo reer Somaliland ah iyo in badan oo aan Somalilander aan ahayn jecelse aqoonsiga Somaliland una halganta af iyo addinba ayaa xilkaa wadaagta. Allah hayna garansiiyo.
Website-kani qoraallada u doodaya aqoonsiga Somaliland ama u jawaabaya kuwa ka soo horjeeda aqoonsiga Somaliland si hagar la’aan ah ayuu usoo dhoweynayaa una baahin doonaa. Website-kani wuxu si gaar ah u baraarujinayaa qurba joogga reer Somaliland, isla markaana dareensiinayaa awoodda ay u leeyihiin u hawlgalka aqoonsiga dalkooda, haddey si cilmiyeysan isu abaabulaan oo ay isu habeeyaan.
Website-kani wuxuu si gaar ah isagu hawli doonaa siyaasaddeena dibada la socodkeeda, ka talo-bixinteeda iyo guud ahaanba sidii aynu Soomaaliland adduunyada uga iibin lahayn. Arintaa wixii la xidhiidha ee qoraallo ah ama ka talo bixin iyo faallo dadaal gaar ah ayuu ka gali doonaa. Qoraaga reer Somalilandna wuxuu ku dhiirrinayaa inay si hagar la'aan ah oo hufan arrintaa wax uga qoraan iyagoo Xukuumadda, Golayasha Xeer Dejinta iyo Xisbiyadaba wixii ay u iftiimin karayaan u iftiimiya.
Website-kani waxa ka reeban baahinta iyo gudbinta baaqyada reeraysan, iyadoo ujeeddadu ay tahay in aynu gaadhnay xilligii dareemadeenna siyaasiga ah aynu qof ahaan iyo koox ahaanba ku gubdin lahayn magac Xisbi, Urur Bulsho, Gobol, Degmo, Magaalo ama Tuulo.
Website-kani isagoo ka codsanaya qoraaga reer Somaliland wuxu qayb ka qaadan doonaa baahinta aqoon siyaasadeed oo cilmiyaysan. Wuxu isku dayi doonaa isagoo haddana adeegsanaya qoraaga reer Somaliland in wax laga qoro xisbinimada, qiimahay leedahay, iyo adkaynta dareenka xisbinnimo oo ah sida runtu tahay asaaska dimoqraadiyada. Wuxu isku dayi doonaa dimoqraaddiyadaynta xisbiyada qudhooda ilaa aynu ka arkayno laanta Xisbiga ee Tuulada, Degmada, Gobolka iyo Xafiisyada heerka qaran ee xisbiyada oo xubnaha xisbiyada ku jiraa ee haysta kaadhadhka xisbiyadu ay doortaan heerarkaa kala duwan ee xisbi kasta hoggaamiyayaashiisa.
Copyright @ 2006 Somalilandhorta. All rights reserved.